Ahoana ny fomba hanombohana podcast ho an'ny orinasanao (miaraka amin'ny lesona ianarako avy amiko!) | Martech Zone
Alakamisy 4 martsa 2021 Alakamisy, Septambra 30, 2021 Douglas Karr
Rehefa nanomboka ny podcast-ko taona lasa izay dia nanana tanjona telo miavaka aho:
Authority - tamin'ny fanadinadinana ireo mpitarika ao amin'ny orinasako dia te hampahafantatra ny anarako aho. Tena niasa izy io ary nanjary tamina fotoana mahavariana - toy ny fanampiana podcast an'i Luminaries an'ny mpiara-miasa izay nahatonga ny 1% ambony indrindra tamin'ireo podcast henoin'ny ankamaroany nandritra ny fotoana nitondrany azy.
fanantenana - Tsy saro-kenatra aho amin'ity… misy orinasa tiako hiara-miasa amiko satria hitako fa misy ifandraisany amin'ny paikadiko sy ny azy ireo ny kolontsaina. Nandeha izany, niasa tamin'ny orinasa mahavariana aho, ao anatin'izany i Dell, GoDaddy, SmartFOCUS, Salesforce, Angie's List… ary maro hafa.
Voice - Rehefa nitombo ny podcast nataoko dia nanararaotra ahy hizara ny sain'ny mpitondra hafa amin'ny asako izay manan-talenta sy mirongatra nefa tsy dia fanta-daza. Tsy saro-kenatra aho fa te hanao ny podcast hampidirina bebe kokoa sy isan-karazany hanatsara ny fahitana azy sy hahatratra azy.
Izany dia nilaza fa tsy mora izany! Lesona nianarana:
Fiezahana - ny ezaka fikarohana, famokarana, famoahana ary fampiroboroboana ny atiny dia lava kokoa noho ny tena fanaovana dinidinika. Ka ny podcast 20 minitra dia mety maharitra 3 ka hatramin'ny 4 ora amin'ny fotoako hanomanana sy hamoahana azy. Izany dia fotoana tena sarotra amin'ny fandaharam-potoananako ary nanasarotra ahy hitandrina haingana.
vahana - Tahaka ny fiasan'ny bilaogy sy ny media sosialy, toy izany koa ny podcasting. Rehefa mamoaka ianao dia mahazo mpanaraka vitsivitsy. Io fanarahana io dia mitombo sy mihalasa… noho izany ny laharam-pahamehana dia manakiana ny fahombiazanao. Tadidiko fa rehefa nanana mpihaino zato aho, an'aliny aho izao.
Planning - Mino aho fa afaka mampitombo ny tanjoko raha toa ka minia mikasa bebe kokoa amin'ny fandaharam-potoanan'ny podcast-ko koa aho. Te-hamorona kalandrie atiny aho, ka nifantoka tamin'ny lohahevitra manokana aho nandritra ny taona. Alao an-tsaina ny volana janoary oktobra ho volana e-varotra ka manomana ny vanim-potoana ho avy ny manampahaizana!
Fa maninona no tokony hanomboka Podcast ny orinasanao?
Ivelan'ny ohatra nomeko tetsy ambony dia misy ny manery statistika momba ny fananganana podcast izay mahatonga azy io ho antonony mendrika hojerena.
37% ny olona any Etazonia no nihaino podcast tamin'ny volana lasa.
63% ny olona no nividy zavatra navoakan'ny mpampiantrano podcast tamin'ny seho nataon'izy ireo.
Amin'ny taona 2022, tombanana fa ny fihainoana podcast dia hitombo ho 132 tapitrisa ny olona any Etazonia irery.
Businessfinancing.co.uk, famatsiam-bola amin'ny asa aman-draharaha, ary mpampindrana tranokala fikarohana sy fampahalalana any UK, dia manao asa mahatalanjona amin'ny fitetezana anao amin'izay rehetra ilainao hahazoana ny podcast-nao. The infographic, Torolàlana momba ny orinasa kely hanombohana podcast mandeha amin'ireto dingana manaraka mahaliana ireto… azonao antoka fa tsindrio ny lahatsoratr'izy ireo izay ampian'izy ireo loharano iray taonina!
Misafidiana a lohahevitra ianao irery ihany no afaka manolotra… aza hadino ny fikarohana ao amin'ny iTunes, Spotify, SoundCloud, ary Google Play hahitana raha afaka mifaninana ianao.
Raiso ny tsara mikrô. Hamarino trano studio sy tolo-kevitra momba ny fitaovana eto.
Hianatra ny fomba Ovay ny podcasto mampiasa rindrambaiko fanovana toa sahy, Garageband (Mac ihany), Adobe Audition (miaraka amin'ny suite cloud an'ny famoronana an'ny Adobe). Mihamaro ihany koa ireo sehatra sy fampiharana an-tserasera!
Raketo an-tsoratra ny podcast anao a Video hahafahanao mampakatra azy amin'ny Youtube. Ho gaga ianao firy ny olona mihaino mankany amin'ny Youtube!
Get fampiantranoana namboarina manokana ho an'ny podcast. Podcast dia lehibe, fisintomana rakitra ary ny mpizara tranonkala mahazatra anao dia ho sempotra amin'ny fantsom-pifandraisana ilaina.
Manana lahatsoratra lalina momba ny toerana anaovana izany izahay mampiantrano, syndicate ary hampiroborobo ny podcasto izay manome ny antsipiriany ny fantsom-pifandraisana, syndication ary fampiroboroboana samihafa azonao araraotina.
Loharanom-pahalalana hafa iray ho ahy (miaraka amin'ny podcast tsara) Orinasa mpampita vaovao Brassy. Jen dia nanampy olona an'arivony hanomboka sy hanangana ny paikadim-podcasting ho an'ny orinasa.
Oh, ary aza hadino ny misoratra anarana Martech Zone Interviews, podcast-ko!
Tags: ny fomba hanombohana podcastfanovana podcasttonian-dahatsoratra podcastmikrô podcaststatistika podcastpaikady podcasttoro-hevitra podcasttoro-hevitra podcastingmanomboka podcast
Fandraisana feo ho an'ny iMovie miaraka amin'ny fakan-tsary amin'ny Internet sy mikrôfôna samihafa